Savorovoron’ny fifidianana Mamono afo ny Praiminisitra
Governemanta sy loholona Miharihary ny ady mangatsiaka
Adiny fito sy fahefany teo ny fihaonana teny amin’ny Lapan’Anosikely nisian’ny fampahafantaran’ny praiminisitra Ntsay Christian ny politika ankapoben’ny fanjakana na ny PGE tamin’ny antenimierandoholona omaly.
Fifidianana - CENI Haverina amin’ny laoniny ny anaran’ireo tsy tao anaty lisitra
Efa eo am-pijerena ireo anaran’ny olona tsy voasoratra tao anaty lisi-pifidianana ny eo anivon’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana na ny Ceni.
Minisiteran`ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Tokony ho matotra amin`izay..
Nantsoina haneho ny safidiny amin’izay ho ben’ny tanàna hitondra ny kaominina ny vahoaka.
Imbiky Herilaza “Manan-danja ny fametrahana ben`ny tanàna eto Antananarivo”
“Tsy hitsara ireo zavatra efa lasa fa tokony hipetraka sy hitodika amin`ny tsaratsara kokoa isika. Mendrika zavatra tsara ny tanànan`Antananarivo amin`ny maha renivohitra azy”, hoy i Imbiki Herilaza, mpahay lalàna,
Marc Ravalomanana Nolanian’ny depiote TIM ho lehiben’ny mpanohitra
I Marc Ravalomanana no nofidian’ireo depiote miisa 16 lany tamin’ny anaran’ny antoko Tiako I Madagasikara ho lehiben’ny mpanohitra, araka ny fifidianana notontosaina teny amin’ny foiben’ny TIM eny Ankadivato ny 19 aogositra teo.
Fampandrosoana an`Antananarivo Miainga avy amin`ny tsirairay
Amin`ny ankapobeny, ny fampandrosoana dia tsy maintsy miankina amin’ny mpitondra sy ny entina. Itsy voalohany dia miandraikitra ny fanatsarana ny lafiny toekarena sy ny sosialy. Ao anatin`izany, ny fampandrosoana entin`ny mpandraharaha.
Lalàna mifehy ny mpanohitra Holanian’ny depiote anio…
Lahadinika teny amin’ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza omaly ny volavolan-dalàna mifehy ny fanoherana. Tsy mbola nisy ny zavatra tena tapaka.
“Ao anatin`ny fiandrasana ny voka-pifidianana ny rehetra amin` izao ka ilaina ny fitoniana sy fanarahana lalàna hatrany ny fiandrasana izany ary ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana no tompon` ny teny farany mandamina izay voka-pifidianana raikitra izay”
hoy ny praiministra Ntsay Christian raha nitafa fohy tamin` ny mpanao gazety omaly. Ny fifidianana natao teto Madagasikara dia tao anatin` ny fitoniana sy filaminana ary miara manaiky, hoy izy, fa misy korontana goavana tamin` iny fifidianana iny. Raha jerena ny tetiandro dia tokony efa eny anivon` ny CENI ireo vokatra rehetra avy amin` ireo SRMV amin` izao fotoana fanangonana vokatra izao. Manao antso avo anefa ny Praiministra amin’ireo Kandidà sy ny mbomba azy ary ny vahoaka, mba hanaja ny lalàna velona ka hitondra eo anatrehan’ny Fitsarana mahefa ny raharaha rehetra mety ho fifanolanana. Nanamfy izy fa tsy mila korontana ary aoka ny HCC afaka manapaka farany ireo olana tamin` ny fifidianana. Ahoana moa no tokony hitony ny vahoaka? Ny Filoham-pirenena moa dia mahita ny voka-pifidianana mialohan` ny fotoana. Ny taham-pahavitriana dia tena ambany, izay maneho ny tsy fankasitrahan` ny vahoaka Malagasy ny Fitondrana ankehitriny. Distrika maromaro no nisehoana fomba fanoherana isan-karazany. Ireo firaisamonim-pirenena dia efa nanao fanambarana fa ny ankabeazan’ireo endrika fanoherana ireo dia fanehoan’ny vahoaka ny fiarovany ny safidiny tsy ho voahidinkodina, ka mba ho tena izay olona nosafidiny no hisolotena azy eny amin’ny Antenimieram-Pirenena. Araka izany, adidin’ ny fitondrana ny mitandro ny tsy fitanilàna sy ny fahombiazana eo amin’ny andraikitra sahaniny, satria zava-dehibe sy mankadiry ny fihazonana ny fahatokisan’ny vahoaka amin’izao fotoana ao aorian’ny latsa-bato.